Google yakadzinga vangangoita makumi masere vashandi nekuda kwekudonhedza mushandisi data uye zvakavanzika data kune vanhu vari kunze kwekambani | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura chirevo chakaburitswa zvinoshungurudza izvo inoratidza Google yakadzinga vashandi vanosvika makumi masere nekuda kwekushandisa zvisirizvo pakati pa80 na2018, iyo inosanganisira kubiwa kana kuburitswa kweruzivo rwekambani uye kuwana kune mushandisi kana data revashandi mukutyora marongero ayo.
Mune uyu mushumo zvinotaurwa kuti zhinji dzekupomerwa (86%) zvine chekuita nekutadza kutarisirwa kweruzivo zvakavanzika, senge kuendesa mafaira emukati kumapati ekunze, nepo 10% ichienderana nekushandisa zvisirizvo kwemaitiro, kusanganisira kuwana mushandisi kana data revashandi kana kubatsira vamwe kuwana iyi data.
Gwaro iro inorondedzera zviito zvevashandi ava, Inopawo manhamba ekongiri ekuti vashandirwi vepamhepo vanotsvaga vega vari kushandisa sei chinzvimbo chavo kuba, kuvuza kana kushungurudza iyo data yavanogona kuwana.
Kunyatso kuferefetwa kwezviitiko zvakaita kuti zvikwanisike kuziva vashandi vakapinda muchirongwa ichi. Gwaro rinoti chete mu2020, Google yakadzinga vashandi makumi matatu nevatanhatu pamusoro pezvekuchengetedza. Makore maviri apfuura aonawo mugove wavo wezviitiko zvekuchengetedza.
Iye munhu akapa gwaro akati Google yakabvisa vanhu makumi maviri nematanhatu mu26 uye 2019 muna18 nekuda kwezviitiko zvekuchengetedza. Gwaro rinotsanangura kuti kudzingwa haisi iyo yega nzira iyo Google iri kubata aya mamiriro; zvinotaurwa kuti kambani dzimwe nguva inogovera yambiro.
Izvo zvinotaurwa kuti nezve 86% yezvekupomerwas zvine chekuita nekuchengetedzeka kune vashandi zvinoreva kusatarisirwa zvakanaka kwakavanzika ruzivo, senge kuendesa ruzivo rwakakosheswa kune vechitatu mapato. Gumi muzana yezvese zvinopomerwa mu2020 zvinonzi kushandiswa zvisirizvo kwemahurongwa kana mapuratifomu anotambira data revashandisi, kusanganisira kuwana mushandisi kana data revashandi kutyora zviga zveGoogle.
Mu2019, iyo nhamba yakaverengera 13% yezvese zvirevo zvekuchengetedza. Gwaro iri rinoshora kubatsira vamwe kuti vawane iyi data, kana iyo modification kana kubviswa kwemushandisi kana mushandi data.
“Nyaya dzinotaurwa dzinonyanya kureva kuwaniswa zvisina kukodzera kana kushandiswa zvisizvo kwedata rekambani kana chivakwa chakavanzika. Nekuremekedza data remushandisi, isu tinogumira mukana wevashandi kuwana kuburikidza nhevedzano yeindasitiri-inotungamira matanho ekuchengetedza. "
"Tine kunyanya: kudzikisira kuwana dhata revashandisi kune izvo zvinodiwa, zvinoda kururamisa yekuwana iyo data, kuongororwa kwakawanda-nhanho usati wawana mukana wekuwana zvakavanzika kupihwa uye kuongorora kusanzwisisika uye kutyorwa kwekuwana. Uyezve, huwandu hwekutyorwa, kungave nemaune kana kusaziva, inogara yakaderera. Mushandi wega wega anowana dzidziso yegore negore, tinoongorora zvese zvinopomerwa uye kutyorwa kunotungamira mukugadzirisa zvinhu kusanganisira kumiswa, ”akaenderera mberi.
"Tiri pachena mukuburitsa nhamba nezvakabuda mukuferefeta kwedu kuvashandi vedu uye takaitawo matanho akasimba anotibvumidza kuchengetedza data revatengi nevashandisi pane chero kutyisidzira kwemukati kana kwekunze," akadaro mutauriri. Pamusoro pezvo, zvemukati mekutengesa idambudziko uye maitiro aya anowanzopararira mu tech indasitiri. Mhosva dzakatove dzakawanikwa mumakore achangopfuura paFacebook, Snapchat, nezvimwe, uye MySpace, uko vashandi dzimwe nguva vaishandisa mukana wavo wekutevera kana kushora vashandisi.
Mumwe mutauri weGoogle akati:
"Zviitiko zviri kutaurwa izvi zvine chekuita nekusvikirwa zvisirizvo kana kushandiswa zvisirizvo zvakavanzika zvemakambani kana IP."
“Kuwanda kwekutyorwa, kungave kuri nemaune kana kusaziva, kwakaderera nguva dzose. Vashandi vese vanodzidziswa gore rega rega, isu tinoongorora zvese zvinopomerwa uye kutyorwa zvinotungamira mukugadzirisa matanho kusanganisira kugumiswa, uye isu tine matanho akasimba munzvimbo yekuchengetedza data revatengi nevashandisi kubva kune chero zvityisidziro zvemukati kana zvekunze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yakadzinga vashandi vangangoita makumi masere nekuda kwekuburitsa data revashandisi nedata rega kune vanhu vari kunze kwekambani